> Resource> iPad> Olee otú iji Hichapụ Photos si iPad Igwefoto Roll
Olee otú m ihichapụ foto site na Igwefoto Roll on iPad enweghị adịkwa ha na albums? Nke a bụ ịzọpụta iCloud ohere. (Site Apple Nkwado obodo)
Chọrọ ebughibu ala gị iPad Igwefoto Roll naanị na-photos ị chọrọ? Nwere depụtaghachiri Igwefoto Roll photos na album, na ugbu a ị nwere ike amasị ka ihichapụ ndị a kwekọrọ ekwekọ foto na igwefoto Roll? Ọ bụ ya mere mfe ugbu a. Ihe niile ị chọrọ bụ iji usoro - Wondershare TunesGo (Windows) ma ọ bụ Wondershare TunesGo (Mac).
Usoro ihe omume na-ahapụ gị ihichapụ iPad Igwefoto Roll foto na ogbe. Ke adianade do, ọ bụrụ na ị kwadoo ndị a Igwefoto Roll photos ọzọ album, echegbula. Nke a na usoro ga na-ihichapụ foto na igwefoto Roll, na na-na ndị ọzọ album.
Download a usoro ka ihichapụ Igwefoto Roll si iPad!
Olee ka ihichapụ foto site na iPad Igwefoto Roll
Na-esonụ nkebi a, anyị ga-egosi na ị na mfe nzọụkwụ ka ihichapụ hiri nne foto site na iPad Igwefoto Roll na oge. Ebe a, anyị dị nnọọ na Windows version dị ka ihe atụ. The Mac version na-arụ ọrụ a simialr ụzọ.
Nzọụkwụ 1. Launch usoro ihe omume na Jikọọ gị iPad na kọmputa
Na mbụ, ịwụnye a iPad Igwefoto Roll ihichapụ ngwá ọrụ na kọmputa gị. Mgbe ahụ, ẹkedori ya. Mgbe ahụ, jiri eriri USB jikọọ gị iPad na kọmputa. Ozugbo ahụrụ, gị iPad ga-egosipụta ke akpan window.
Cheta na: iPad Air, iPad 2, iPad Obere, iPad, iPad na Retina ngosi na The New iPad na-agba ọsọ iOS 9/8/7/6/5-n'ụzọ zuru ezu na-akwado.
Nzọụkwụ 2. Nhichapụ Igwefoto Roll on iPad
Lee, faịlụ gị iPad na-egosi na ekpe sidebar. Iji wepu foto gị iPad Igwefoto Roll, pịa "Photos" taabụ. Mgbe ahụ, ị ga-esi na foto management window ke ziri ezi. Mepee Igwefoto Roll. Ọ bụrụ na ị chọrọ ka a ndabere tupu nhichapụ, ị nwere ike pịa "Export ka" iji nyefee iPad Igwefoto Roll photos na kọmputa.
Ugbu a, họrọ foto na i bu n'obi ka ihichapụ. Mgbe ahụ, pịa "Hichapụ". N'oge usoro, ị kwesịrị ị na-iPad ejikọrọ na kọmputa.
Ọfọn, ị ga-doo anya banyere otú ka ihichapụ a foto site Igwefoto Roll on iPad. Ọ bụ n'ezie mfe na mgbalị, ọ bụghị ya? E wezụga Igwefoto Roll photos, a bara uru omume na-enye gị ike ihichapu ihe osise Photo Library dị ka mma.
Ọ bụrụ na ị ihichapụ iPad Igwefoto Roll photos tupu akwado ha, echegbula. Ị nwere ike mgbake gị furu efu iPad Photos mfe.
N'okpuru ebe bụ video nkuzi. Biko lelee ya.
Ugbu a, download a usoro inwe a-agbalị.
Olee Otú Ị Pụrụ Nyefee Music si iPad ka iPod
Nyefee Music si iPad ka iTunes na 3 Mfe Nzọụkwụ
Olee Otú M Pụrụ Watch Movies On iPad
The top 10 Best Mpịakọta enyem ngwa ọdịnala n'ihi iPad
Otú nyefee Data si Samsung Galaxy ka iPad
Otú e si etinye Movies on iPad